SAWIRO:-Soomaaliya iyo Sida Looga Ciiday | Voice Of Somalia
SAWIRO:-Soomaaliya iyo Sida Looga Ciiday
Posted on September 25, 2015 by Voice Of Somalia Image
Kumanaan Shacab ah oo Markii Ugu Horraysay Ku Ciiday Degmada Janaale 8 Maalmood Kadib Markii Laga Xureeyay Ciidamada AMISOM.
Dabaal degyo iyo damaashaadyo aan horay loo arag ayaa ka socda magaalooyin katisan gobolka shabeelaha Hoose oo maalmo ka hor laga xureeyay ciidamada gumeysiga AMISOM.
Kumanaan shacab ah ayaa isugusoo baxay fagaarayaasha waaweyn ee magaalada Janaale oo kaabiga ku heysa magaalada Marka xarunta shabeelaha Hoose.
Mas’uuliyiin katirsan wilaayada Islaamiga shabeelaha Hoose ayaa fagaara ah uga khudbeeyay shacabka muslimiinta,wariye katirsan Idaacadda Islaamiga Andalus oo ku sugan Janaale ayaa soo sheegay in markii ugu horraysay sedax sanadood oo ixtilaal ah kadib shacabka Janaale ay maanta dabaal degayaan iyagoo ku hoos nool ku dhaqanka shareecada Islaamka.
Ammaanka magaalada waxaa adkeeyay ciidamada xisbada mujaahidiinta oo la arkayay iyagoo dadka kusoo dhaweynaya farxad iyo rayn rayn.
Sheekh Max’med Abuu Cabdalla Waaliga Shabeelaha Hoose oo salaaddii ciidda kadib khudbad xasaasi ah ujeediyay reer Janaale ayaa sheegay in ciidamadoodu ay sii wadi doonaan dib u furashada magaalooyinka fara kuturiska ah ee gacanta mujaahidiinta ka maqan.
Kumanaan shacab ah ayaa iyagoo qiiraysan socod kumaray waddooyinka Janaale,dadka ayaa sheegay in xilligii ciidanka shisheeyaha Uganada ay xoogga ku joogeen magaaladooda ay kadeed iyo caburin dareemayeen balse markii mujaahidiintu qabsadeen Janaale ay waxbadan isbedeleen.
Tobaneeyo gaadiid ah oo ay la socdeen shacab ka yimid magaalada Marka ayaa Janaale si diirran loogusoo dhaweeyay kuwaasi oo usoo ciidaysay degmadaasi xurta ah.
“Meeshan aan maanta fadhino barxaddan aadka u weyn laguma tukan sanooyinkii lasoo dhaafay sababtoo ah muslimiintu waxay ka baqayeen in cadawga ilaahey waxyeello allaah ayaa ku mahadsan cadawgii naga saaray”ayuu yiri Abuu Cabdalla.
Sida ay muujinayaan sawirrada lagasoo qaaday magaalada Janaale shacabka ayaa si farxad leh ugu ciiday waddooyinka magaalada oo 17,9,2015 laga xureeyay ciidamada gumeysiga Uganda ee qeybta ka ah shisheeyaha AMISOM.
Muuqaalladan ayaa fariin cad u ah in shacabka Soomaaliyeed ay jecelyihiin maamullada islaamiga ah ee taabacsan Xarakada Al Shabaab ayna necebyihiin shisheeyaha dalkooda kusoo duulay.
Halkan ka dhageyso Kalimadda Sh.Abuu Cabdalla MP3
Magaalada Ceeldheer Ee Gobolka Galguduud oo Si Heer Sare ah Looga Ciiday.
Magaalooyinka ku hoosjira ku dhaqanka Shareecada Islaamka ee maanta laga ciiday waxaa ka mid ah magaalada xeebta saaran ee lagu magacaabo Ceeldheer, taas oo dhacda bariga Wilaayada Galgaduud.
Waxaa halkaas isugu soo baxay dadweyne aad u farabadan oo salaadda ciidda ku tukanayey fagaaraha Shareecada ee magaalada Ceeldheer.
Sidoo kale galabta waxaa Ceeldheer ka dhacay Fantasiyo iyo dabaal deg ku aadan munaasabadda ciidda, Iyadoona halkaas lagu soo bandhigay ciyaaro kala duwan.
Idaacadda Andalus waxay isku dayi doontaa in ay idiin soo gudbiso qaabkii uu u dhacay Fantasiyahaas iyo dadweynaha ka soo qeybgalay balse hadda nala daawada sida looga ciiday magaalada Ceeldheer iyo fagaarihii lagu tukaday Salaadda ciidda.
Sidee Looga Ciiday Magaalada Jilib Ee Gobolka Jubbada Dhexe.
Bulshada Muslimka ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada gobalada Jubbooyinka ayaa qeyb ka ah bulshada maanta sida weyn ugu dabaal dagayo munaasabada maalinta kowaad ee Ciidul Adxaa oo ka mid ah ciidaha Allaah uu ku maneystay adoomadiisa Muslimiinta ah.
Fagaara ku yaala degmada Jilib ayeey saaka isugu soo baxeen bulshada ku nool degmada iyo deegaanada hoostaga’iyagoona fagaaraha ku dukaday salaada Ciidul Adxaa.
Hoos Ka Daawo Sida Looga Ciiday Magaalada Jilib.
Sida Looga Ciiday Magaalada Galhareeri Ee Gobalka Galgaduud.
Degmooyinka iyo deegaanada Wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud ayaa maanta si wada jir ah looga wada ciiday maalinta kowaad ee ciidul Adxaa’iyadoona dadka Muslimiinta ay salaadda Ciidda kuwada dukadeen fagaara yaal wilaayada u iclaamisay bulshada Muslimka ah iney Salaadda ku dukadaan.
Fagaaraha Al-ansaar ee magaalada Galhareeri ayaa ka mid ah fagaarashayaasha maanta Salaadda Ciidul Adxaa ay ku dukadeen bulshada Muslimka ah ee ku dhaqan wilaayada Galgaduud’waxaana fagaarahaasi dadka Salaadda ciidda ku dujiyay Waaliga Wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud Sheekh Xasan Yacquub Cali.
Waaliga Galguduud Sheekh Xasan Yacquub Cali oo salaaddii Ciidda kadib shacabka goob fagaara ah kala hadlay ayaa sheegay in istish-haadka Sheekh Mukhtaar Abuu Zubeyr uusan wax saameyn ah ku yeelan doonin dagaalka jihaadka soomaaliya ee loogasoo horjeedo shisheeyaha dalka kusoo duulay.
Hoos Ka Daawo Sawirada Iyo Sida Looga Ciiday Magaalada Galhareeri.
Alshabaabul Mujaahidiin iyo Shacabka oo Si Weyn Ugu Ciiday Degmada Saakow.
Boqolaal Dagaalyahano oo katirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin iyo Shacab ayaa maanta si weyn ugu ciiday Magaalada Saakow ee wilaayada islaamiga ah Jubooyinka.
Salaada Ciidul Adxaa ayaa lagu dukaday Fagaaro loo cayimay Bulshada Muslimiinta ee Degmada Saakow.
Waaliga Jubooyinka Sheekh Cabdiraxmaan Xudeyfa oo kalimad ka jeediyay Goobta ayaa soo hadal qaaday jabkii shisheeyaha Amisom kasoo gaaray Gobalka Shabeelaha Hoose.
Hoos Ka Daawo Sawiro Idaacadda Alfurqaan ay kasoo qaaday Fantasyaha Saakow.
Maxaad ka taqaanaa Shanta Jeneral ee Itoobiyaanka ah ee daaha gadaashiisa ka maamula gayiga Soomaaliyeed.
VIDEO:-C/raxmaan Faroole oo ku baaqay in Itoobiya xoog ku soo gasho Puntland ‘Gayiga Soomaaliyeed’ Xasan Sheekhna u sheegay inow Kursiga ka dego